MODA | Article Detail | အလှပြင်ရရင်ပျော်နေတာဆိုတဲ့ Tinky
ညိုစိမ့်စိမ့်အလှနဲ့ Tinker Bell လေးပေါ့
ကလေးဘဝရဲ့ အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ Disney ကာတွန်းဇာတ်ကားလေးတွေကို နှစ်သက်ကြသူတွေအနေနဲ့ Peter Pan ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်လေးကိုလည်း စိမ်းကြမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ Peter Pan ကို Live Action အနေနဲ့ ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှာတစ်ခါ ၊၂၀၀၃ ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာတစ်ခါ ရိုက်ကူးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာလည်း Peter Pan ရဲ့ နောက်ထပ် Live Action Remake ဇာတ်ကားအဖြစ် ၂၀၂၁ခုနစ်အတွင်းမှာ ထပ်မံထွက်ရှိလာဖို့ရှိတယ်လို့ Disney က ပြီးခဲ့တဲ့ March လပိုင်းလောက်က ကြေညာထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Live Action ရဲ့ အမည်ကိုတော့ Peter Pan & Wendy လို့ ပေးထားပြီး Disney ချစ်သူတွေအနေနဲ့တော့ အသစ်နဲ့ အဟောင်းကြားက ကွဲပြားတဲ့ ရိုက်ကူးတင်ဆက်မှူတွေကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်မျှော် ကြည့်ရှူရမယ့် အနေအထားပါပဲ။
ဒီတစ်ခေါက်ထွက်ရှိလာမယ့် Live Action Remake ဇာတ်ကားကတော့ ၁၉၅၃ ခုနှစ်က Peter Pan ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကျောရိုးအတိုင်း အနီးစပ်ဆုံးတူညီမယ်လို့သိရပြီး Wendy ရဲ့ နာမည်ကိုပါ ဇာတ်ကား Title မှာထည့်ထားတဲ့ပုံအရ သူမအကြောင်းတွေကို ပိုအသားပေးပြီးမြင်ရသွားဖို့ရှိမယ်လို့လည်းယူဆရပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ Peter Pan ဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကကျတဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ နတ်သမီးလေး Tinkerbellနေရာမှာတော့ Grown-ish ဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ဖွားလူမည်းမင်းသမီးလေး Yara Shahidi က သရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။
Disney အနေနဲ့ မူရင်းဇာတ်လမ်းရဲ့ လူမည်းမဟုတ်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေနေရာမှာ လူမည်းသရုပ်ဆောင်တွေကို ရွေးချယ်မှူနဲ့ပတ်သက်ပြီး The Little Mermaid ဇာတ်ကားမှာကတည်းက ဝေဖန်ချက်အမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ရပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်ဇာတ်ကောင်မှာတော့ Yara ဟာ Tinkerbell အနေနဲ့ လိုက်ဖက်တယ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေ အများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Yara ဟာ ယခုလက်ရှိ Grown-ish ဇာတ်လမ်းတွဲအပြင် Imagine That,The Sun Is Also A Star ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပြီး Small Foot ဆိုတဲ့ Animation ဇာတ်ကားမှာလည်း အသံသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူတစ်ဦးပါ။
အခု Tinkerbell နေရာကနေ ရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုတော့ Yara Shahidi က သူမရဲ့ Instagram account မှာ "lettssssgooooo #Tinkerbell" ဆိုတဲ့စာသားနဲ့တကွ သူမရဲ့ အစိမ်းရောင်Dress ဝတ်ထားတဲ့ ပုံလေးကိုတင်ပြီး အသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြုံးချိုချိုနဲ့ လှပတဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Yara Shahidi အနေနဲ့ Tinker Bell နတ်သမီးလေးအဖြစ် ဘယ်လောက်ထိ လိုက်ဖက်နေမလဲဆိုတာကတော့ ပိတ်ကားပေါ်မှာပဲ ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်သွားရမှာပါပဲ။
#Live Action Remake
ပန်းချီပညာဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက တည်ရှိပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်သလို လူသားတွေရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကို ပုံဖော်တဲ့ ပညာတစ်ခုလို့လည်းဆိုလို့ရပါတယ်။ ပန်းချီနဲ့ပတ်သက်လို့ ခြုံငုံလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ပညာရှင်တစ်ဦးချင်းစီဟာ ကိုယ်အားသန်ရာ မတူညီတဲ့ အနုပညာဖန်တီးဟန်တွေနဲ့ ပန်းချီရသအမျိုးမျိုးပေါ်လွင်အောင် ရေးဆွဲလေ့ရှိကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီလိုဖန်တီးကြတဲ့အခါမှာလည်း တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စိတ်အားထက်သန်ရာ ရေးဆွဲဟန်တွေအလိုက် မတူညီတဲ့ အခေါ်အဝေါ်နဲ့ မတူညီတဲ့ ဖန်တီးမှူရသတွေကို သက်ဝင်ခံစားမိမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီလိုရေးဆွဲဟန်အမျိုးမျိုးထဲကမှ လူသိများတဲ့ ရေးဆွဲဟန်တွေကတော့ ဒြပ်မဲ့ပန်းချီ (Abstract)၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပန်းချီ (Digital Art)၊ခေတ်ပြိုင်ပန်းချီ (Contemporary Art)၊ နံရံဆေးမှုတ်ပန်းချီ(Graffiti Art) ၊မော်ဒန် (Modern Art)၊ပို့စ်မော်ဒန် (Post Modern)နဲ့ သရုပ်မှန် (Realism) ပန်းချီတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။
အဲဒီ ပန်းချီရေးဆွဲဟန်အမျိုးမျိုးထဲမှာ Realism ဆိုတဲ့ သရုပ်မှန်ပန်းချီရေးဆွဲဟန်ကတော့ ပိုပြီး အခြေခံကျသလို ပိုပြီးလည်းလူကြိုက်များထင်ရှားခဲ့တဲ့ ရေးဆွဲဟန်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သရုပ်မှန်ပန်းချီနဲ့ပတ်သက်လို့ ခေတ်အဆက်ဆက် ပညာရှင်တွေအများကြီး ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့အထဲကမှ ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ သရုပ်မှန်အနေအထားထက်ကို ကျော်လွန်ပြီး အနုစိတ်ကျလွန်းတာကြောင့် Hyperrealism လို့ သတ်မှတ်ရတဲ့အထိ ထူးခြားတဲ့ ပန်းချီရေးဆွဲဟန်တွေကို တွေ့မြင်လာရပါတယ်။ အဲဒီ Hyperrealist Artist တွေထဲမှာ လက်ရာမြောက်လွန်းလို့ လူတိုင်းပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်ရတဲ့အထိ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပန်းချီဆရာတစ်ဦးကတော့ Leng Jun ဆိုတဲ့ တရုတ်ပန်းချီဆရာတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Leng Jun ကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်မှာ စီချွမ်ပြည်နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာ ဝူဟန်တက္ကသိုလ်ကနေအနုပညာဘာသာရပ်နဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ခေတ်ပြိုင်ပန်းချီဆရာတစ်ဦးအနေနဲ့ သိကြပြီး သူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့မခြား သက်ဝင်ထူးခြားလွန်းလှတဲ့ ပန်းချီကားတွေကြောင့် နာမည်ရလာတဲ့ ပန်းချီဆရာတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Leonardo da Vinci ရဲ့ ပန်းချီကားတွေကို သဘောကျခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး Hyperrealist ပန်းချီကားဟာ မိုနာလီဆာ ပန်းချီကားကို inspired ယူပြီး ဒီဘက်ခေတ်မိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့ ပုံတူကိုရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပန်းချီကားတွေထဲမှာ လူသိအများဆုံးကတော့ အစိမ်းရောင်ဆွယ်တာဝတ်မိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့ ပုံတူဆီဆေးပန်းချီကားပါ။ ဘယ်လောက်ပဲအနီးကပ်ဆွဲကြည့်ကြည့် လူအစစ်နဲ့မခြား တူလွန်းတဲ့အပြင် ဆွယ်တာကထွက်နေတဲ့ သိုးမွှေးချည်စလေးတွေတစ်မျှင်ချင်း သွေးကြောတစ်ခုချင်းကအစ မြင်ရတဲ့ထိ အနုစိတ်ဆွဲထားတဲ့ သရုပ်မှန်လွန် ပန်းချီကားတွေက တကယ့်ကို သြချရလောက်အောင် ပညာသားပါတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Leng Jun ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ပုံတူပန်းချီကားတစ်ကားရဲ့ အမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ တန်ဖိုးဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ $4,703,168 ခန့်အထိရှိခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Follow လုပ်ထားသင့်တဲ့ Tiktok ပေါ်က ချစ်စရာ ကောင်ဆိုးလေးများ
Tik tok Video လေး ခဏကြည့်ပြီး ကြွေမိသွားတဲ့သူရှိလား။ Facebook မှာပေါ်လာတဲ့အချိန်ပဲကြည့်မိလိုက်တာမို့ အားပေးဖို့ နာမည်မသိလိုက်ရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိမှာပါ။ ကဲဒီတော့ အားမပေးလိုက်ရတာမရှိအောင်၊ မျက်လုံးလည်း အနားပေးရာ ရောက်အောင် ချစ်စရာအကောင်းဆုံး TikTok ကောင်ဇိုးလေးတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားပေးတဲ့သူများပြီး Follower တွေလည်း မနည်းမနှောမို့ ဘယ်တစ်ယောက်ကို အကြိုက်ဆုံးလဲ ပြောခဲ့ပါအုံး။
Jacob ကိုတော့ မသိတဲ့သူမရှိလောက်ပါဘူး အဆိုတော်အနေနဲ့ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုအတော်လေးရလာပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်အသည်းကျော် Millie Bobby Brown နဲ့လည်း ၂၀၁၇တုန်းက တွဲခဲ့ဖူးပါတယ်။
TikTok ID: @weeklychris
သူ့ရဲ့ Unique Dance Move နဲ့ အမိုက်စား Video တွေကြောင့် TikTok မှာ နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတော်တော်ရှိသူပါ။
TikTok ID: @camerondalls
နာမည်ရပြီးသား Internet Personality နဲ့ Actor ဖြစ်တာကြောင့် Tiktok မှာ လူကြိုက်များပါတယ်။ သူ့ရဲ့အပြုံးတွေကို မိန်းကလေးတိုင်းက ကြွေရလောက်သူပါ။
TikTok ID: @jesseunderhill
ဆံပင် ခွေခွေကောက်ကောက်တွေက သူ့ရဲ့ အမှတ်အသားဖြစ်မှာပါ။ သူရဲ့ TikTok Video လေးတွေက မိန်းကလေးတိုင်းကို ရင်ခုန်စေပါတယ်။
TikTok ID: @lilhuddy
ကျောင်းသားကားတွေမှာဆို မိန်းကလေးတိုင်း ကြွေရတဲ့ Boy Crush ပုံစံလေးပါ။ Fashion ပိုင်းဆိုလည်း တော်တော်လေးအထာကျတဲ့သူပါ။ TikTok Star တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Charli d’Amelio နဲ့ တွဲခဲ့ဖူးပြီး ပရိတ်သတ်တွေတော်တော်ကြိုက်ရတဲ့ အတွဲလေးဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
TikTok ID: @nickentt
ကောင်ဇိုးလေးဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ တော်တော်လေး လိုက်တဲ့သူပါ။ မိန်းကလေးပရိတ်သတ်တွေက သူရဲ့ ပေတိပေစောင်းရုပ်လေးကိုပဲ ကြွေနေရတာပါတဲ့။
TikTok ID: @mekaic
ကပြားလေး Mekai ကို မမတွေ ဘာလို့ အသည်းစွဲဖြစ်နေတာလည်း ဆိုတာ သူ့ရဲ့ Tiktok လေးတွေကြည့်ပြီး အဖြေရှာကြည့်ပါနော်။
#Tik Tok Cute Boy
Disney ရဲ့ ကမ္ဘာကျော် ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မူလန်ကို Live Action အနေနဲ့ ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားကို မကြာသေးခင်က Online Streaming အနေနဲ့ ပြသခဲ့တာ ပရိသတ်အတော်များများ ကြည့်ရှူပြီးဖြစ်ကြမှာပါ။ ဒီမူလန်ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ယောက်ျားပီသတဲ့မျက်နှာပေါက် ဆွဲဆောင်မှူရှိတဲ့ အပြုံးချိုချိုနဲ့ ကြည့်ရှူသူမိန်းကလေးပရိသတ်အများစုရဲ့ရင်ကို ညှို့ယူဖမ်းစားသွားတဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးကိုလည်း သတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကတော့ မူလန်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တစ်ဦးလည်းဖြစ် အဓိကဇာတ်ကောင်တစ်ဦးလို့လည်းဆိုလို့ရတဲ့ Chen Honghui ဆိုတဲ့နေရာကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Yoson An ဆိုတဲ့ မင်းသားချောလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
An ကို မကာအိုမှာ မွေးဖွားတာဖြစ်ခဲ့ပြီး ပေါ်တူဂီနဲ့မကာအို သွေးနှောတဲ့ ကပြားလေးတစ်ဦးပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးအဖြစ်ခံယူထားပြီး အခုချိန်မှာတော့ အသက် ၂၈ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ An ဟာ မူလ မူလန်ဇာတ်ကားမှာ လုံးဝမပါရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကောင်အသစ်ဖြစ်တဲ့ Honghui နေရာကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးသာမက Filmmaker တစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ An ဟာ ဟိုးအရင်ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Crouching Tiger, Hidden Dragon မှာတုန်းက Casting Department မှာ လက်ထောက်အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Mulan ရဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကို တရားဝင်ကြေညာပြီးကတည်းက An ရဲ့ ပုံစံဟာ လူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှူကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ Honghui ရဲ့ ကာရိုက်တာအရ အရမ်းချောမောနေတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးမလိုချင်ပဲ အာရှမျက်နှာပေါက်ဘက်ကိုရောက်ပြီး ယောက်ျားဆန်တဲ့ရုပ်ရည်မျိုးကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့အခါ ဒီကာရိုက်တာနဲ့ An ဟာ အလိုက်ဖက်ဆုံးပဲလို့ အားလုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အာရှဆန်တဲ့ မျက်ရစ်မရှိတဲ့မျက်နှာမျိုးကိုမှ ဆွဲဆောင်မှူပြည့်တဲ့ အပြုံးကိုထပ်ပေါင်းထားတဲ့ An အတွက် လိုချင်တဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့ထပ်တူကျဖို့အတွက် ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းကိုသာ ကြိုးစားပြုပြင်ဖို့လိုခဲ့တာပါ။အစတည်းက အားကစားနဲ့ ကိုယ်ခံပညာကို လေ့လာလိုက်စားခဲ့သူမို့ ဒီဇာတ်ကားထဲရိုက်ကူးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားရအောင်လည်း Training သုံးလအတွင်းမှာ ကောင်းကောင်းကြိုးစားပြုပြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် An ဟာ ကရာတေးခါးပတ်နက်ရရှိထားသူဖြစ်ပြီး MMA , Jujitsu,Kickboxing လိုအခြားကိုယ်ခံပညာတွေကိုလည်း အနည်းငယ်တတ်မြောက်ထားသေးတဲ့အတွက် ကိုယ်ခံပညာပိုင်းမှာ အထူးတလည်လေ့လာစရာမလိုခဲ့တဲ့အပြင် ကိုယ်တိုင်ကလည်း နာရူတိုဇာတ်လမ်းတွဲ Fan တစ်ဦးဖြစ်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မူလန် Live Action ဟာ ကာတွန်းဇာတ်လမ်းကနေ တော်တော်လေးကွဲထွက်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး နှစ်သက်ကြသူတွေလည်းများသလို ထင်သလောက်ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးဆိုပြီး အားမရခဲ့ကြသူတွေလည်းအများကြီးပါ။မူရင်းဇာတ်ကားမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Mushu , Shang နဲ့ ပုရစ်လေးတို့မပါတော့တဲ့အပေါ်မှာလည်း တော်တော်လေး ဝေဖန်မှူတွေများခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဇာတ်ကားထုတ်လွှင့်ပြသပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ An ဟာ သူရဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးသူတစ်ယောက်အဖြစ် အကောင်းဆုံးပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သက်သေပြခဲ့ရုံမက ဆွဲဆောင်မှူရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် Charming ဖြစ်တဲ့ အပြုံးချိုချိုတွေနဲ့ ကြည့်ရှူသူ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကို ကောင်းကောင်းရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Mulan ဇာတ်ကောင်အတွက် သရုပ်ဆောင်ပေါင်း ၁ထောင်ကျော်ကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ Liu Yifei
ခက်ခက်ခဲခဲရထားတဲ့ Role ပါ။
တရုတ်သိုင်းကား Fan တွေနဲ့တော့ Liu Yifei က စိမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဂူးဂူးလေးလို့ လူသိများတဲ့ Liu Yifei ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ပရိတ်သတ်တွေကတော့ Mulan Live Action နဲ့ ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ Mulan အကြောင်း မပြောခင် Liu Yifei ရဲ့ အကြောင်းလေးကို နည်းနည်းမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
Liu Yifei က တရုတ်ပြည် Wuhan မြို့မှာ မွေးဖွားတာဖြစ်ပြီး အသက်၁၀နှစ်ခန့်မှာ အမေဖြစ်သူနဲ့ အတူ အမေရိကားကို ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကို လေးနှစ်ခန့်နီးပါးသင်ကြားခဲ့ရပြီး အဲ့ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ မိဘနှစ်ပါးက ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Entertainment လောကထဲဝင်ရောက်ဖို့အတွက် တရုတ်ပြည်ကို ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး IMDB အရ အသက် ၁၅နှစ်မှာ Beijing Film Academy ကို ဝင်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာတော့ Fairy Sister ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ လူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Mulan ဇာတ်ကောင်မှာ သရုပ်ဆောင်ရဖို့ လွယ်လွယ်နဲ့ ရရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးပေါင်း ၁၀၀၀ကျော်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာပါ။ ဒါရိုက်တာကိုယ်တိုင်က နေရာငါးနေရာမှာ ရှာဖွေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပါဝင်သူ အယောက်ပေါင်း ၁၀၀၀ကျော်ကို စိစစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ ထုတ်ဝေသူတွေကလည်း Martial Art ကျွမ်းကျင်ပြီး English လို ပြောနိုင်တဲ့သူကို ပိုပြီးဦးစားပေးပြီး သတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ မင်းသမီးကောင်းကောင်းတစ်လက် ကိုလိုချင်ခဲ့ကြတာပါ။
အမေရိကားမှာ နေထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ Liu Yifei အတွက် English ဘာသာစကားက မစိမ်းသလို တရုတ်ပြည်မှာလည်း အောင်မြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့သူပါ။၂၀၁၄ ခုနှစ်က ထွက်ရှိတဲ့ Outcast နဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထွက် The Forbidden Kingdom ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူပါ။ အဆိုပိုင်းမှာလည်း ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ Mayonaka no Door ဆိုတဲ့ ဂျပန်သီချင်းက Demashita! PowerPugg Girls Z ရဲ့ အပိတ်သီချင်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့တာပါ။
Mulan Live Action က ထင်သလောက် အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပေမယ့် Liu Yifei ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုတော့ မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ ဒီ Live Action မှာပါတဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း Stunt တွေနဲ့ သီချင်းသီဆိုမှုကို သူမကိုယ်တိုင်သာ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Stunt သမားမပါပဲ Fighting Scene တွေကို Professional ဆန်ဆန်အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်သွားခဲ့တာ ရိုက်ကူးရေးသမားတွေအားလုံးက အံ့သြသင့်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဆိုတော့ Mulan ဇာတ်ကောင်နဲ့ လိုက်မလိုက်ဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ တွေးသာကြည့်လိုက်တော့နော်။
အစားတစ်လိုင်းတွေ Follow လုပ်ထားသင့်တဲ့ ပြည်တွင်းက Food Blogger များ
Social Media မှာ Blogger တွေ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့များလာတာနဲ့ အမျှ သက်ဆိုင်ရာ အမျိူးအစားလိုက်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေ အားပေးမှုများလာတာတွေ့ရပါတယ်။ Beauty Blogger တွေ၊ Fashion Blogger တွေအကြောင်း ရေးသားပြီးတဲ့နောက် ဒီတစ်ခါမှာတော့ အစားအသောက်ကို ခုံမင်တဲ့သူတွေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံက Food Blogger တွေအကြောင်းကို တစ်ဖန်ပြန်ပြီး မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ အစားအသောက်ပျက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်၊ ငတ်ကြီးကျချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် Review လေး လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် အသုံးဝင်သွားအောင် Follow ထားဖို့ အခုပဲကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ (အခြား Food Blogger ကောင်းကောင်းတွေ အများကြီးရှိမှာဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်လက်လှမ်းမှီသလောက်သာ မျှဝေပေးထားတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ကြိုပြီးအသိပေးချင်ပါတယ်နော်။)
Mali Ingra - Food & Travel
ခရီးထွက်တဲ့အချိန် အစားအသောက်ကောင်းကောင်း မြည်းစမ်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် အိုခေအဆင်ပြေမယ့် Page လေးပါ။ မမ မလိရဲ့ ဒေသထွက် အစားအသောက် Review တွေကို ဖတ်ရင်း ကိုယ်တိုင် ခရီးသွားအရသာကို ရမှာမို့ စိတ်ကြည်နူးမှုဖြစ်စေမှာပါ။
Where I Eat Halal Food
Halal Food တွေကိုသာ သုံးဆောင်ချင်တဲ့ Foodie လေးတွေအတွက် ဒီ Page လေးက တော်တော်လေး အသုံးဝင်မှာပါ။ စားချင်တဲ့ အစားအသောက်မှန်သမျှကို Halal ရနိုင်မယ့် နေရာလေးတွေ ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ Review လေးတွေကိုလည်း အသေအချာလေး ရေးထားပေးတာမို့ အကြိုက်တွေ့မှာပါ။
Celebrity တွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး ဟင်းချက်ပြတတ်တဲ့ Page ပါ။ မုန့်လုပ်နည်းလေးတွေ၊ ဟင်းချက်နည်းလေးတွေကို တစ်ဆင့်ချင်းစီအလိုက် သေသေချာချာလည်း မျှဝေပေးတာကြောင့် ကိုယ်တိုင်လည်း ကြည့်ရင်း လုပ်ချက်နိုင်မှာပါ။
Ser mal - စားမယ်
Mukbang ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ကြည့်နေရင်း သရေကျအောင် စားပြမယ့် Page လေးပါ။ Travel Food Video လေးတွေကိုလည်း Quality ကောင်းကောင်းနဲ့ မပျင်းရအောင် တင်ဆက်တတ်တာမို့ Food Channel တစ်ခုကို ကြည့်နေရသလို ခံစားရမှာပါ။
ပရိတ်သတ်အားပေးမှုများတဲ့ ချစ်စရာ Food Blogger မမရဲ့ Page ပါ။ လွယ်ကူတဲ့ဟင်းချက်နည်းတွေ၊ အရသာကောင်းကောင်း Street Food တွေကို ရှာဖွေပြီး တင်ဆက်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ မကြာမကြာ Live လွှင့်ပြီးတော့လည်း အားပါးတရ စားပြတတ်တာမို့ ဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန်ဆို အတော်လေး အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်က Food Lover တွေအတွက် ဘယ်ဆိုင်၊ ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတာကို Review သေသေချာချာလေး ရေးပြီး မျှဝေပေးလေ့ရှိတဲ့ Page ပါ။ ထူးထူးခြားခြား ရွာချက်ဟင်းလက်ရာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် တွေကိုလည်း ရွာဓလေ့စတိုင်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းအောင် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြတတ်တာမို့ မဖြစ်မနေကြည့်သင့်ပါတယ်နော်။
ဒီ Page ကိုတော့ တော်တော်များများ ဝင်ကြည့်ဖူးကြလောက်မှာပါ။ Seafood Resturant ဆိုပေမယ့် ဆိုင်ရှင်မမရဲ့ အားရပါးရ စားပြတဲ့ Live တွေကြောင့် နာမည်ကြီးပါတယ်။ အထောင်းတွေ၊ ပင်လယ်စာတွေကို ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် သရေကျရမယ့် Page လေးမို့ Follow လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
Sugar Daddy ကြီး Dan Bilzerian ဘေးက အမိုက်ဆုံး မဒီ ၁၀ ယောက်
Dan Bilzerian ဆိုတဲ့ ဘဲကြီးကို မသိတဲ့သူ ခပ်ရှားရှားဖြစ်လောက်မှာပါ။ သူ့ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ ရှုးသွပ်စရာ ပါတီပွဲတွေက အားလုံးကို အံ့သြစရာဖြစ်စေတာ အမှန်ပါ။ ဒီအထဲကမှ သူ့ဘေးမှာ အမြဲရှိနေတဲ့ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ ခပ်ဟော့ဟော့ကောင်မလေးတွေကိုလည်း အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေက အမြဲစိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေတာပါ။ Dan Bilzerian ဆိုတာနဲ့ အမိုက်တက အမိုက်ဆုံးကောင်မလေးတွေနဲ့ ကဲနေတာကို အမြဲတွေ့ရမှာပါ။ မော်ဒယ်လ်မလေးတွေကလည်း ဒီလို Life မျိူးမှာ ပျော်ပါးသောင်းကျန်းဖို့ Dan Bilzerian ဘေးနား နေခွင့်ရမယ့် အချိန်ကို စောင့်နေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Dan Bilzerian အကြောင်းကိုတော့ ကိုယ့်လူတို့က သိထားပြီးနေလောက်ပါပြီ။ ဆိုတော့ သူ Favourite အဖြစ်ဆုံး၊ အလန်းဆုံး၊ အမိုက်ဆုံး ကောင်မလေးတွေက ဘယ်သူတွေလဲ! Instagram မှာပါ အပြေးအလွှား Follow လုပ်လို့ရအောင် စုစည်းဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
10. Hailey Grice
လောလောလတ်လတ် Covid ဖြစ်ပြီး Quarantine နေရတဲ့အခိုက် အတူရှိနေတဲ့သူကတော့ အငယ်ဆုံးလေး Hailey Grice ပါ။ Dan ရဲ့ Ig မှာလည်း သူမနဲ့ပုံကို တော်တော်များများတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
9. Desiree Schlotz
အသက် ၂၂နှစ်သာရှိသေးတာမို့ အငယ်ဆုံးစာရင်းဝင်ထဲက တစ်ယောက်ပါ။ Instagram Model ဖြစ်ပြီး Dan နဲ့ တွဲပြီးကတည်းက အလုပ်တွေအများကြီး လက်ခံရပြီး နာမည်ကြီးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Katie Bell ပြီးရင် Ignite အတွက် Photoshoot တွေ တော်တော်လေး လုပ်ပေးရတဲ့သူပါ။
8. Chloe Othen
အင်္ဂလန်သူလေး Chloe ကလည်း ပူတဲ့ရာသီဥတုကို ကြိုက်တဲ့ပုံပါပဲ။ Miss Earth Winner တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မော်ဒယ်လုပ်နေတဲ့ Chloe ကို Dan နဲ့ Beach တွေမှာ အတူတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။
7. Lauren Blake
Dan နဲ့ အတူရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို ဘယ်တော့မှ နောင်တမရဘူးလို့ ဆိုလာသူပါ။ Fitness Promoter ဖြစ်သလို Biochemistry ဘွဲ့ရ Lauren က သူကြောင့် ကျွန်မ Follower တွေများခဲ့ရသလို School Loan တွေ ပြန်ဆပ်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
အခြားကောင်မလေးတွေထက် Dan နဲ့ အချိန်တော်တော်များများ ဖြုန်းလေ့ရှိတဲ့သူပါ။ ဆိုတော့ Dan ရဲ့ Favourite Girl တစ်ယောက်ဆိုတာ ပြောစရာတောင်မလိုလောက်ပါဘူး။ ပြည်ပခရီးတွေသွားရင် ပါသွားလေ့ရှိပြီး Dan ရဲ့ Mommy လို့တောင် ပြောကြပါတယ်။
5. Hannah Palmer
အမေရိကားမှာရှိတဲ့ University of Arizona ကျောင်းဆင်းဖြစ်ပြီး နုဂိုထဲက ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်အဖြစ် လူသိများပါတယ်။ Dan ရဲ့ ပါတီပွဲတွေ၊ Vacation တွေမှာ တွေ့ရစိပ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
4. Leidy Labrado
Tropical ပိုင်းက နိုင်ငံခြားသူလေးတွေကို သဘောကျတတ်တဲ့ Dan အတွက် Leidy လေးကလည်း တော်တော်လေး ဆွဲဆောင်မှု ကောင်းစေမှာပါ။ Cuba သူလေးဖြစ်ပြီး မျက်နှာပေါက်က ပုံမှန် Dan ဘေးမှာရှိတဲ့ ကောင်မလေးတွေထက် ထူးခြားတာအမှန်ပါ။
Dan ကိုယ်တိုင်က သူမကို တွေ့ပြီး ချဉ်းကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ Ignite Brand နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း သူမကို အရှေ့မှာ အမြဲထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေစပြီး Dan ဘေးက အဟော့ဆုံး မိန်းကလေးစာရင်းထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။
2. Sofia Bevarly
Dan Bilzerian ရဲ့ ဘေးက ကောင်မလေးတွေထဲက Sofia ကို လူသိအများဆုံးဖြစ်မှာပါ။ Dan ရဲ့ Favourite အဖြစ်ဆုံးကောင်မလေးဖြစ်သလို နှစ်တော်တော်များများ Dan ရဲ့ Righ hand girl လေးအဖြစ် ရှိနေခဲ့တာပါ။
1. Andreea Cristina
Dan တွဲခဲ့သမျှကောင်မလေးတွေထဲမှာ ဒီ Bucharest သူလေးကိုတော့ ကိုယ်ပါ တကယ်ကြွေမိတာ အမှန်ပါ။ ကိုယ်ကြွေသလို Andree ကို ကြွေတဲ့ယောင်္ကျားထုကြီးကလည်း မနည်းမနောပါ။ ဘယ်လောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုရင် မယူရင် သတ်ပစ်မယ်တို့၊ Stalk လုပ်တာတွေပါ ကြုံရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Beauty & Lifestyle Blogger အဖြစ်ရပ်တည်နေပြီး ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ 2018 မှာ လက်ထက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
#Dan Bilzerian Girls